Betroka : Basy roa sy mpamatsy basy ary mpanadio omby halatra tratra | NewsMada
Betroka : Basy roa sy mpamatsy basy ary mpanadio omby halatra tratra
Dahalo miisa telo, mpiray tsikombakomba roa, ka mpimasy ny iray, ary mpamatsy fitaovam-piadiana sady mpanadio omby halatra iray voasambotry ny zandarimariam-pirenena any Betroka, noho ny asan-dahalo niseho ny 22 novambra tao Bekijoly, kaominina Analamary.
Basy miisa roa no azo tamin’izany, dahalo roa kosa no maty taorian’ny fifandonana. Tafaverina ihany koa ny omby rehetra nangalarin’ireo dahalo. “Ny alin’ny 22 hifoha 23 novambra, nahazo antso ny zandary avy ao amin’ny kaompania Betroka fa misy dahalo maromaro nangalatra omby miisa 14 tao an-tanàna. Tsy niandry ela fa avy hatrany dia niatrana izy ireo ka niova ho fanakanan-dalana ireo dahalo ny iraka fisafoana amin’ny alina izay nampanaovina azy ireo”, hoy ny zandary. Nisy ny fifandonana fotoana fohy taorian’izay ka vaky nandositra ireo dahalo ary navelany ny hazany. Lavo ny dahalo roa. Ny iray lasan’ny rano rehefa lavon’ny fifandonana ka tsy mbola hita ny razana. Lehilahy iray izay dahalo efa nokarohana efa ela antsoina hoe Thomas, isan’ny namono nahafaty ny GPHC Pila, tao Betroka, ny 29 jona lasa teo ihany koa no lavo ka azon’ny zandary ny basy nentiny, FC cal 16 sy bala maromaro.
“Rehefa nojerena io basy io, fantatra fa an’ny lehilahy iray ao Betroka izay olona nipetrahan’io dahalo io teo aloha ka nosavaina ny tranony ary nahatrarana taratasy mirakitra kaonty namarotana bala miisa 230 (famatsiana bala dahalo) sy « fiche individuelle de bovin » na Fib miisa 33 (fanadiovana ireo omby halatra). Marihana fa efa voasambotry ny zandary tany aloha izy io nandritra ny « opération tandroka » noho ny asan-dahalo ihany ary efa nisazy noho izany”, hoy ny fanazavana.
Voalaza fa nisy ny fanarahana ny dian-tongotra sy dian-drà an’ireo dahalo vitsivitsy naratra tamin’ny fifandonana ka rehefa tonga teo amin’ny fokontanin’Antondrobe, lehilahy iray mpimasy no tratra teo am-pamafana ireo dian-tongotra sy dian-drà ireo ka nosamborina avy hatrany. Tratra tao an-tanàna tao ihany koa ny dahalo iray izay efa nokarohina hatry ny ela ary nosamborina niaraka taminy ny mpampiantrano azy. Nisy lehilahy iray hafa koa tao izay tsy nisy nahafantatra azy ny olona tao an-tanàna ary tsy nisy nahita izay niaviany. Tsy manan-kavana na namana ao akory izy io na iray aza. Nosamborina ihany koa ity farany ity. Nentina nanaovana famotorana nanampy azy ireo ny hilahy iray hafa izay tsy nanana taratasy mazava tamin’ny fahafahany mitana basy. Miandry ny fitsarana azy ireo olona ireo.